Magetsi bhuruu, yazvino uye yakashinga ruvara rweimba yako | Bezzia
Kana uchitsvaga ruvara rwekupa a chinyorwa chemazuva ano uye chine ushingi kumba kwako, Usafunge nezvazvo zvakare, bhuruu yemagetsi ndiyo ruvara rwako. Hatigone kutaura kuti imhando yemavara akafanana Peri chaizvo, Pantone Rudzi rweGore 2022, yakaipisisa inogara iri imwe nzira yakanaka yekuwana nzvimbo dzizere nehunhu.
Imba yako yekutandarira inoda spark? Iwe hauzive kuwedzera hunhu kune chena yekurara pasina mari yakakura? Kana iwe ukashinga nechinhu chinopenya, yemagetsi yebhuruu ichava shamwari huru. Iwe unogona kupenda madziro kana magonhi mune iyi ruvara kana iwe uchida kuputsa nezvose kana kuishandisa zvakanyanya kungwara mudiki fenicha kana zvinhu zveunyanzvi. PaBezzia tinogovana mamwe mazano newe nhasi.
Zvinogona kuita seruvara rwakaoma kubatanidza mukushongedza kwedzimba dzedu, asi zvakapesana; yemagetsi yebhuruu ivara rinoshandiswa zvakasiyana-siyana uye inobatanidza zvakakwana nemamwe mavara mazhinji. Ivara rinokatyamadza, iro risingarambike, ndosaka zvakakosha kuziva kusvika papi patiri kuda kuzviisa panjodzi kana kuti takashinga sei, nekuti nekufamba kwenguva zvinogona kutinetesa.
Imba yekutandarira, yekudyira uye yekurara Iwo makamuri umo isu tinogona kutamba nebhuruu iyi tisingatyi uye isu takatarisana navo mune ino chinyorwa. Iwe unoda mazano ekuibatanidza mune imwe uye imwe? Nhasi iwe uchawana mukusarudzwa kwedu kwemifananidzo kufemerwa kwese kwaunoda kuzviita.
1 Muimba yekudyira
Kutarisa pamifananidzo inotevera hapana kupokana: zvigaro vanova nzira yakakurumbira yekubatanidza magetsi ebhuruu muimba yekudyira. Haisi iyo pfungwa yakanaka here kupenda kana kusimudzira macheya ako emagetsi eblue? Saka iwe unogona kuvapa hupenyu hwechipiri uye uwane kubata kwemazuva ano uye kwakashinga muimba yako yekudyira panguva imwe chete.
Uri kutsvaga dzimwe nzira dzekutanga here? Bet pakupenda ma clown patafura mune iyi ruvara kana shinga isa kabati yebhuruu pedyo netafura yako yemapuranga. Uye usazeza kupenda madziro mune iyi ruvara kana iwe uchida kupa mukurumbira mukamuri yekudyira mukati menzvimbo yakakura sekicheni kana imba yekutandarira.
Imba yekutandarira kazhinji ndiyo imba hombe mumba, iyo inobvumidza iwe kuti ushinge nechimwe chinhu chinonakidza. Kuregererei penda madziro Kana kuti magonhi mukati mumagetsi ebhuruu? Zvichava zvinokatyamadza, hapana kupokana nezvazvo. Ko kana iwe ukavhara iyo TV kabati pamadziro ebhuruu akapendwa? Ipfungwa yakanaka muimba yekutandarira senge iri pamufananidzo ine uriri hwakasvibira uye madziro ane ruvara rwakajeka uye fenicha.
Sofa, chigaro chemaoko kana pouf kune dzimwe nzira dzekubatanidza iyi yemazuva ano uye ine ushingi ruvara muimba yekutandarira. Uye iwe unogona kuzviita zvisinei nechimiro chekamuri ino sezvaungaona mumufananidzo uri pamusoro. Mhedzisiro yacho ndeyekushinga asi kana ukashandisa mavara asina kwaakarerekera semubatsiri unorerutsa nzvimbo.
Mabasa ehunyanzvi uye machira Ndiyo imwe nzira yekubatanidza mabhurashi ebhuruu pasina kunyanya kurema. Gumbeze pasofa yakatsvuka, vase patafura yekofi kana geometric print pamadziro inogona kukwana kwauri.
Yemagetsi yeblue headboard ichakwanisa kushandura imba yese yekurara. Mushure mezvose, iyi ndiyo rusvingo rukuru rwekamuri, umo maziso ose anowanzotungamirirwa. Unoda kuisa njodzi zvakanyanya here? Penda kana kuvhara rusvingo rwebhuruu uye wedzera cushion muvara wakafanana pamubhedha kuti uite kuenderera mberi.
Iwe unogona zvakare kubatanidza iyi yebhuruu kuburikidza nemubhedha, nekavha yeduvet kana plaid pamubhedha wako wakapfeka zvichena. Muchena, pasina mubvunzo, imwe yemavara ekubatanidza magetsi ebhuruu, asi kwete chete; nuances madiki mune zvese matsvuku, maranjisi, masardard kana magirini; Vachanyatsoenderana neiyi.
Unoda magetsi eblue? Iwe unoshinga kuibatanidza mukushongedza kweimba yako?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Decoration » Kushongedza maitiro » Magetsi bhuruu, yazvino uye ine ushingi ruvara rweimba yako
Skirt uye mabhoti akakwirira, kusanganiswa kwakakwana munguva yechando